Isita yevana veIsita muchimiro chepepa zai | Inobatsira ruzivo kune wese munhu
Vachave vachifara kugadzira zvidiki zviyeuchidzo zvehama dzavo. Iyi dzidziso inokuratidza maitiro ekugadzira chirangaridzo cheIsita muchimiro chezai. Zai rakashongedzwa nemhando dzese dzezvinhu izvo zvinoteedzera dendere reshiri, shavi rinopepereka, marin'i anopenya.
Zvishandiso zvekugadzira iyo Easter craft:
bepa rakagadzirwa rakanaka nemufananidzo;
ribhoni re satin;
tambo yakatetepa kana twine;
nyemba chena kana plasticine;
Nzira yekugadzira dhizaini yePasika mumatanho
1. Cheka hwaro hwehunyanzvi kunze kwekadhibhodi dhizaini ine mufananidzo. Gadzira tsananguro yakafanana nezai. Iyi fomu inoenderana, sezvo tiri kutaura nezvezororo iro kana makeke eIsita nemazai akapendwa akauya pamberi.
2. Pei rakapedzwa zai rinofanira kuve rakashongedzwa. Kune izvi, unogona kushandisa zvese zvinhu zvakanyorwa pamusoro.
Tora chidimbu chebhendi rakatetepa re satin uye unamatire kune zai. Ruvara rwetepi runogona kuve chero paunofunga. Gadzira bhora diki yetambo kana twine ino teedzera dendere reshiri.
Iwe unogona zvakare kuwedzera chaiwo matavi, minhenga uye zvimwe zvinhu pano. Kugadzira mazai madiki, shandisa machena epurasitiki, asi gadzira zvikamu zvakapedzwa mufiriji, kana kushandisa bhinzi chena.
3. Namatidza dendere kune satin ribhoni, namatidza mazai mukati. Dhavhara mazai ne glitter kumusoro. Mirira kuti vaome.
4. Tora yakakosha cabochon iyo inoshanda seyekushongedza kwechinyorwa. Nyora "Happy Easter" kana kumwe kukwazisa pakapepa chena nemapeni ejel, namatidza zvakanyorwa pachigadziko chakanaka.
Iwe unogona zvakare kupurinda zvakanyorwa. Kokora chinyorwa kumusoro kwezai.
5. Shongedza hunyanzvi nehafu mhete, uta hwakagadzirwa neribhoni nehafu macheka, batanidza kune chero nzvimbo dzemahara dzaunoda.
6. Batanidza shavishavi rakatemwa kumusoro. Unyanzvi hunonakidza hwakagadzirira Isita.
DIY mazai eIsita - mazai akafanana neefriji magetsi
Mibvunzo ye58 mu database yakagadzirwa mu 0,348 masekondi.